မိုဘိုင်းဖုန်းများ - samsung galaxy note92-sim Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
မိုဘိုင်းဖုန်းများ classified: အသုံးပြုပြီး SAMSUNG GALAXY NOTE92-SIM
SAMSUNG GALAXY NOTE9| 2-SIM RAM 6-GB / Memory 128-GB / 99% NEW. PRICE 645000 : KYATS SAMSUNG GALAXY NOTE9| 2-SIM RAM 8-GB / Memory 512-GB / 99% NEW. PRICE 725000 : KYATS Screen အရိပ် နှင့် အမဲစက် (လုံး၀) မရှိပါ/မရောင်းပါ အိမ်မှာဘဲ ရောင်း/၀ယ်/လဲ လုပ်သည် ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးပါ ဆက်သွယ်ရန် 09 79 54 20 729 စိတ်တိုင်းကျ၀ယ်ယူစစ်ဆေးလိုပါက အိမ်မှာလာရောက်၍ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မင်္ဂလာစျေးနှင့် မင်္ဂလာမွန်စျေးဝင်ပေါက်ရှေ့ (၁၃၇) လမ်း တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Ko Nge Lay Mobile Facebook Page တွင်လည်း ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/kongelaymobile/